Uqweqwe ngoba Gingerbread endlini zingenziwa imikhiqizo ehlukene. Isihluthulelo lokhu - ngokuqinile nezidingo iresiphi. Kuphela kulesi simo uzothola i-dessert yasekuqaleni futhi enhle ukuthi nakanjani eziyojatshulelwa wonke amalungu nendlu yakho, ikakhulukazi izingane.
Chocolate Uqweqwe ngoba Gingerbread indlu: isinyathelo iresiphi
Ngemva kumiswa Gingerbread indlu enhle kumelwe ucabange kanjani manje kufanele zokuhlobisa. Sanquma ukuthi afake isicelo lesi enamathela ushokoledi. Ukuze ekuwulungiseleleni sidinga:
shokolethe - 1.5 amathayili standard;
Oil izinga ibhotela - spoon elincane;
ubisi olunamafutha amancane noma fresh - 3 nezinkezo ezinkulu;
anemibala powder khekhe - ukusetshenziswa ngokubona.
Yenza nokucwebezela okuzothile
Ngaphambi ukupheka Uqweqwe ngoba Gingerbread, kufanele kube ukuba baphule ibha ushokoledi zibe tincetu futhi uwafake endishini metal. Okulandelayo, engeza ibhotela isidlo-ikhwalithi ephansi fat ubisi. Ngemva isitsha kumele ibekwe endaweni okugeza amanzi kancane kancane kulungele. Ngenxa yalokho, kufanele uthole iyunifomu ushokoledi enamathela ngaphandle yinhlama.
Indlela ukuhlobisa kahle indlu Gingerbread?
Ngemva Uqweqwe ngoba Gingerbread endlini ayovulelwa, kufanele kube liphole, kodwa ukuze akusiyo eqandisiwe ngokuphelele. Ngemva kwalokho amnandi ushokoledi mass kumele basakaza ngokulinganayo ebusweni dessert usebenzisa ibhulashi ukupheka. Zonke ndawo, kuzwakala angakhishwa kamuva, lapho Uqweqwe Uqinisa.
Gingerbread indlu ukuze uthole powder ewumbukwane, kutuswa ukuba amboze hhayi kuphela ushokoledi elicibilikile, kodwa futhi candy. Ngokwesibonelo, uphahla ungakwazi ufafaze imvuthuluka ezimhlophe, futhi izindonga - blue noma oluhlaza. It is ibuye Kunconywa ukupenda emafasiteleni, eminyango kanye nezinye izimfanelo.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokwenza glaze ushokoledi ngoba indlu Gingerbread. Indlela yaleli dessert kufanele wazi zonke wesifazane. Phela, uyakwazi ukwelapha ukukhonza njengomdala umhlobiso omuhle holiday iyiphi wengane.
Ngemva endlini Gingerbread lihlotshiswe ngokugcwele, kufanele ngokushesha ibekwe ku esiqandisini. Ngenxa yalokho, dessert Kunconywa ukumelana okungenani amahora amathathu. Phakathi nalesi sikhathi luthi alufane ushokoledi ukuba ekugcineni cool.
Khonza okukhona okuzenzela Kunconywa ngefomu jikelele. Kwaba ngemva izingane ukubona Kulokhu Culinary, kungaba ngokuphepha uthathe yizicucu futhi ukwethula itafula inkomishi yetiye.
Senza nokucwebezela okuzothile elimnandi Christmas
Ukuze ufunde ukuthi ungenza kanjani ushokoledi Uqweqwe ngoba Gingerbread endlini, sabatshela ngenhla. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi ukulungiswa le dessert ingasetshenziswa nezinye mass amnandi. Ngokwesibonelo, uma unquma ukupheka Christmas Gingerbread amakhukhi, bona Kunconywa gcoba sauce ukhilimu. Ngaye, sidinga:
ushukela ingenkulu kakhulu - ingilazi egcwele;
isilinganiso lokucuketfwe fat ukhilimu - ingilazi egcwele;
vanilla ushukela - esetshenziswa ukunambitha;
alube uwoyela izinga - isipuni.
Ngaphambi kokwenza nokucwebezela okuzothile amaqebelengwane, kumelwe uthathe epanini encane uthele ke ushukela. Eceleni ukudla amnandi liyadingeka uthele ukhilimu esindayo bayibeke phezu ukushisa low. Shisisa izithako ezimbili kumele kube nje baqala ukushwaqa. Kungase kuthathe nawe mayelana ¼ ihora. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi okuholela kuyadingeka ukubeka izinga ucezu ibhotela elincane vanilla ushukela.
Ngokuphelele ukuxuba izithako, kufanele kube okuhle ugqule ngesipuni enkulu futhi ukushisa ubebushelezi. Lapho zonke izingxenye ziye ziyoncibilika ngokuphelele. Ngemva kwalokho, nokucwebezela okuzothile liyadingeka ususa emlilweni futhi kuphole ekamelweni lokushisa.
Indlela isicelo Gingerbread?
Ngemva ocwebezelayo ezimhlophe amaqebelengwane ayovulelwa futhi esiqandisini, kufanele ngokucophelela isetshenziswa ngomkhiqizo ngamunye usebenzisa ibhulashi ukupheka. Ngenxa yalokho, dessert Kumelwe nilethe ukuba itafula inkomishi ushokoledi ashisayo.
Lungiselela ocwebezelayo ikhaya Gingerbread iqanda omhlophe
Amaphrotheni ocwebezelayo ngokuba Gingerbread kwenziwa kalula futhi ngokushesha. Lokhu isisindo uphelele hhayi kuphela ushokoledi, kodwa futhi ngoba imikhiqizo yobisi.
Iqanda amaprotheni - kusuka 2 amaprotheni ezinkulu (kungaba ezinkulu noma ezincane kuye inani Gingerbread);
umpe lemon fresh - 2 dessert nezinkezo;
ushukela oluyimpuphu - 1.5 izinkomishi.
Ukupheka amaprotheni ocwebezelayo
Ukulungisa amaprotheni ocwebezelayo aphule ngomusa amaqanda futhi ususe izikhupha. Zingaba usizo ngokuhlola noma nezinye izitsha.
Ngakho, amantshu amaqanda kufanele ayifake izitsha ezijulile futhi ayibanzi, futhi ke selehlile futhi isiswebhu ngesivinini usebenzisa blender noma mixer. Phakathi nale nqubo, umkhiqizo kufanele kube kancane kancane uthele ushukela bese uthele kancane fresh kalamula. Ngenxa yalokho, kufanele uthole amaprotheni ozinzile futhi amnandi, okumele abe ngokushesha wasebenzisa nezinye izinjongo.
Manje uzokwazi ukuphendula umbuzo zendlela yokwenza Uqweqwe ngoba Gingerbread. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngesiswebhu amaprotheni mass kumele kusetshenziswe ekuhlobiseni imikhiqizo ngokushesha ngemva ekuwulungiseleleni. Kungenjalo, kungaba axazulule.
Kunezindlela ezimbili zokusebenzisa enamathela amaprotheni. Eyokuqala kuhilela ukusetshenziswa ibhulashi ukupheka, lapho umkhiqizo omhlophe enesisindo kuphela eziqongweni nivame. Ngokuqondene yesibili sihilela ukusetshenziswa packagings ezinkulu. Kuyadingeka ukuba babeka zonke izaqathe, bese ufaka kubo amaprotheni frosting uhlanganise kahle.
Esikhathini esizayo, umkhiqizo kufanele ibekwe slide on ipuleti esikhulu ngokushesha kusebenza etafuleni. Okunjalo udle amakhukhi okungcono zingakapheli izinsuku njengoba amaprotheni ongahluziwe kungenzeka kalula ukuwohloka.
Ukwenza glaze anemibala
ngezinye izikhathi abapheki kudingeka umbala ocwebezelayo ngokuba Gingerbread. Kusukela ke ungenza kophudingi amahle kakhulu futhi olunothile ikakhulukazi izingane ezisencane bayojabula.
ushukela oluyimpuphu - 200;
izithelo noma nemifino umpe yimuphi umbala - 4 nezinkezo ezinkulu;
kalamula - spoon ezinkulu.
Inqubo isinyathelo sokulungiselela
Juice ngokwenza umbala ocwebezelayo angasebenzisa noma iyiphi. Lena ekutholeni umbala oyifunayo. Ngokwesibonelo, ngokuvamile kakhulu esetshenziswa beetroot, carrot, cherry juice noma isipinashi. Kuyadingeka ukuba uthele endishini bese ugcwalisa noshukela oluyimpuphu. Njengoba ukuba izithako ufuna ukwengeza fresh kalamula.
Phela yonke imikhiqizo nezenzo ezichazwe kufanele ugaye ngokucophelela, ukuze ekugcineni uthole mass homogeneous. Kumele ufake ekamelweni likaJehohanani ihamba futhi ushiye kuze khekhe usulungile ngokuphelele.
Sokuphuzisa Futhi Umkhonze
Sebenzisa glaze ezinemibala ku amakhukhi kufanele kube kuphela ngemva mkhiqizo selehlile ngokuphelele phansi. Ukuze afeze le nqubo ezinconywe ukupheka ibhulashi.
Uqweqwe ngoba Gingerbread indlu
Uma engimbumbile wena indlu Gingerbread, kodwa ufuna ukwenza kube shiny ke kutuswa ukusebenzisa Uqweqwe. Kuyinto sasivumela elula futhi kulula. Ngenxa yalesi sidinga:
amanzi okuphuza abavamile - 130 ml;
ushukela esihle - mayelana 250 g
Inqubo kulungiselelwa lukashukela
Indlela ukulungiswa amaswidi ijwayelekile eziningi kusukela ebuntwaneni. Ngoba isimiso esifanayo sasivame ukwenza cockerels yasekhaya.
Ngakho, ngokwenza Uqweqwe ngoba Gingerbread izindlu kuyadingeka ukuze uhlanganise amanzi okuphuza ezejwayelekile ushukela encane kancane ukuxoxa nabo on ukushisa low. Ngemva umkhiqizo amnandi Incibilikile ngokuphelele, mass okuholela is edingekayo ngokushesha asuswe ipuleti. Uma lokhu kuyenziwa ngesikhathi, ushukela iqala ukuba ashise ikulethela kwakhiwa caramel wokushiswa, hhayi uqweqwe lukashukela.
Hlobisa Gingerbread indlu
Ngemuva ukupheka, lukashukela, kufanele ngokushesha wasebenzisa ukuhlobisa indlu Gingerbread. Uma ulinde isikhashana, i-mass amnandi Uqinisa ngokuphelele, futhi ayikwazi uthele dessert.
Ngakho, luthi alufane liyadingeka uthele bonke ubuso endlini, uma kunesidingo esesula nge ibhulashi ukupheka.
Icings walungisa ngokusho iresiphi ngenhla, ngokushesha osemanzi futhi kahle ngisho emazingeni okushisa okuvamile. Ngakho ehlotshisiwe dessert asikho isidingo ukubeka efrijini. Khonza yona etafuleni Kunconywa, kanye nenkomishi yekhofi noma emnyama itiye.
Yini ukupheka kusuka ukhilimu omuncu?
Inani labantu base-Mogilev, isimo sezulu, ezikhangayo